नेपालमा कोरोना संक्रमित अचम्मको तथ्यांक – हाम्रो देश
नेपालमा कोरोना संक्रमित अचम्मको तथ्यांक
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म देशभरि ४ हजार ३६४ जनामा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरू मध्ये महिला ३०९ र पुरुष ४ हजार ५५ जना छन् ।
सबैभन्दा पहिला कोभिड–१९ देखिएको चीनमा भने २० देखि ३९ वर्षसम्मका संक्रमित जम्मा २५ प्रतिशत थिए । त्यहाँ ५० देखि ५९ वर्ष उमेर समूहमा सबैभन्दा बढी अर्थात् २२ प्रतिशत संक्रमित थिए ।
ज्येष्ठ नागरिक एक प्रतिशत भन्दा कम
चीनमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार त्यहाँ ६० वर्ष भन्दा बढी उमेर भएका संक्रमित झण्डै एक तिहाई थिए । ४४ हजार ६७२ मा गरिएको उक्त अध्ययन अनुसार संक्रमित मध्ये ३१ प्रतिशत भन्दा बढी ज्येठ नागरिक थिए ।
तीन प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमित ८० वर्ष भन्दा माथिका थिए । नेपालमा ६१ वर्ष कटेका संक्रमित एक प्रतिशत भन्दा कम छन् ।
बुधबारसम्मको तथ्यांक अनुसार ६१ वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेका ४० जनामा संक्रमण देखिएको थियो । उनीहरू धेरैले स्वास्थ्य लाभ गरिसकेका छन् । तीनजनाको मृत्यु भएको छ ।
नेपालमा ८० वर्षभन्दामाथि एक जनामा कोरोना देखिएको थियो । सुखद कुरा उनले स्वास्थ्य लाभ गरिसकेकी छन् । बाग्लुङकी ६५ वर्षीय महिलाले दमको समस्याका बावजुद कोरोना जित्न सफल भइन् ।
दुई देखि ७६ वर्षसम्मका मृतक
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोनाबाट १५ जनाको मृत्यु भएको छ । सबभन्दा कम उमेरकी बाजुराकी दुई वर्षीय बालिका र बढी उमेरका दोलखाका ७६ वर्षीय पुरुष छन् ।
८ जना ५० वर्षभन्दा कम उमेरका र ७ जना ५१ वर्षभन्दा बढी उमेरका छन् । चीनमा मृतक मध्ये ९४ प्रतिशत ५० वर्ष भन्दा बढी उमेरका थिए । ६० प्रतिशतभन्दा बढी मृतक ६० देखि ७९ वर्ष उमेर समूहका थिए ।
त्यहाँ २९ वर्ष भन्दा कम उमेर समूहका मृतक एक प्रतिशत भन्दा पनि कम थिए ।
युवामा बढी संक्रमण किन ?
जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षित धेरै जसो संक्रमण विदेशबाट आएका देखिएकाले युवाको संख्या बढी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रोजगारीका लागि जानेहरू अधिकांश युवा उमेरका छन्, अहिले विदेशबाट फर्किनेमा बढी केस देखिएकाले युवाको संख्या धेरै देखिएको हो ।’